Tacadiyada Soomaalida loogu geysto dalka Koonfur afrika oo looga hadley Cape town. – SBC
Tacadiyada Soomaalida loogu geysto dalka Koonfur afrika oo looga hadley Cape town.
Posted by admin on Siteenbar 17, 2011 Comments
Waxaa la soo gaba gabeeyay shir socday laba maalin oo looga hadlayay dhibaatada soomaalida loogu geysto dalka koonfur afrika oo ah meel aad loogu waxyeeleyo soomaalida, kulankan oo socday labo maalmood ayaa waxa la isla meek dhigay qodobo dhowr ah.
Shirkana ayaa waxa ka qeyb kalay ururo caalami ah oo u doodo xuquuda qaxootiga iyo waliba haayado ka tirsan qaramada midoobay, sidoo kale waxaa shirka ku sugnaa xubno ka socday dowlada soomaliya.
Wasiir ku xigeenka tamarta iyo macdanta ayaa ka mid ahaa dadkii kulanka ka qeyb kalay waxa uuna aad uga hadlay dhibaatada soomaalida loogu geysto dalka koonfur afrika asagoo sheegay in sanadba sanadka ka dambeeyo ay sii badanayaa dhibaatada loogu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed dalka koonfur afrika.
waxaa sidoo kale madasha soo xaadiray madaxa hey’adda wada tashiga iyo cilmi baarista crd jibriil ibraahim asagoo ku nuux nuuxsaday xiriirka labada dal ee koonfur afrika iyo somalia.
Kulankani ayaa ku soo beegmayo xili isbuucan soomaali lagu laayay gudaha dalka, isla markaana wali aysan jirin cid si rasmi loogu soo qabtay in ay ka dambeeyeen dilka muwaadiniinta soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in uu jiray kulan kale oo caalami ah oo jimcihii lagu soo afjaray magaalada johansberg ee dalka koonfur afrika, kulankan ayaa looga hadlay isbadalka cimilada aduunka, waxaana dhanka soomaliya uga qeyb kalay wasiir ku xigeynka tamarta iyo macdanta.
Saadaad Ahmed Gobey
Cape Town-Koonfur Africa.